Maxay taageerayaasha HVLS sameyn karaan?
In kor loo qaado wax soo saarka shaqaalaha
Waxay umuuqataa in taageerayaasha HVLS aysan wax shaqo ah ku laheyn wax soo saarka. Sidee kaliya taageere u horumarin karaa wax soo saarka? Runtu waxay tahay, shaqaalaha raaxo la'aanta ahi waa shaqaale aan diirada saareyn. Deegaanka cimilada daran waa inay saameyn ku yeelataa wax soo saarka shaqaalaha.
Hawada waxay u janjeeraa inay kala soocdo. Si kale haddii loo dhigo, waxay u kala soocdaa lakabyo kuleyl kala duwan ah, iyadoo hawo kulul ay kor ka sarayso hawada ugu qabowna ay hoos u dhigayso.
Waxaad ka heli kartaa warshado badan oo rakibay taageerayaal saqaf sare oo xajmi weyn leh si ay u ahaadaan kuwo qabow oo hawo leh.Hase yeeshe haddii xawaaruhu uu sare u kaco, gariirku aad ayuu u sii xumaadaa. Fiilooyinka ayaa culeys badan si ay u xanuunsadaan awoodda dhaqdhaqaaqa.Laakiin taageerayaasha xawaaraha sare leh.
Ku rakib Si fudud
Waad ku farxi doontaa inaad ogaato in taageerayaasha OPT HVLS aysan u baahnayn shaqo duug ah ama ay la shaqeeyaan nidaamkaaga HVAC ee jira.
Kaliya ma ahan in hal OPT 24-foot HVLS taageere u bedeli karo kor u kaca laba darsin 36-inch taageereyaal ah, taageerayaasha HVLS waxay u baahan yihiin dayactir aad uga yar kan dhiggooda yar. Ku dar taas cimri dheer oo cajiib ah, iyo taageerayaasha HVLS waa qeexitaanka maalgashi wanaagsan.
Shaqaale badan oo wax soo saar leh, tayada alaabada la isku halleyn karo, dayactir yar, iyo qiimo aad u hooseeya oo kuleylka iyo qaboojinta ah.